Ukuhumusha / Inkokhelo / Zezimali - The Tailoress
Ukukhokhela in lwemali wangakini
Wena uyakwazi ukukhetha inkokhelo emalini yakho oyikhethayo ngokukhetha imenyu ngakwesokunene bar. Lokhu kuzokwenza ngokuzenzakalelayo ukushintsha wonke amanani kwi website intengo ngendlela efanele iguqulwe izwe lakho.
PayPal indlela ukuthenga noma yimuphi umkhiqizo kusuka The Tailoress futhi kuyindlela ephephile futhi elondekile ukwenza izinkokhelo inthanethi. Ngeshwa PayPal ayisekeli yonke zezimali kanye angeke akuvumele ukucubungula oda yakho uma ukhetha lwemali ayisekeli. Kulula ukuxazulula le, umane ukuguqukela lwemali PayPal enza ukusekela bese ungakwazi ukuqedela i-oda lakho.
Ngezansi uhlu zezimali Paypal okwamanje isekela:
Swiss franc angu
amashekeli angamashumi Israeli
Real Brazilian (amalungu Brazilian kuphela)
Ringgits Malaysian (amalungu Malaysian kuphela)
Dollars New Taiwan
ZAMA for Liras Turkish (amalungu Turkish kuphela)
Ukuguqula currency yakho ngezansi: